Mogadishu Journal » 2018 » March » 24
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay xiisada Beledxaawo
Mjournal :-Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed (Madoobe) ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisada ka taagan Magaalada Beledxaawo ee Gobolka Gedo, taasi oo ka dhalatay Darbiga Dowladda Kenya ay ka dhiseyso xuduuda Soomaaliya iyo Kenya. Wuxuu sheegay Axmed...
The African Union Mission in Somalia (AMISOM) has concluded gender awareness training for Somali police officers in four regional states in Somalia, to help broaden their knowledge on human rights. Over 98 police officers and other security personnel were trained in Kismayo,...
Wasiir looga yeerey golaha Aqalka sare
Mjournal :-Ka dib markii Maanta ay kulan ku yeesheen Magaalada Muqdisho xildhibaanada Aqalka Sare ayaa waxa ay kaga hadleen qodobo ay ka mid aheyd dhibaatada ka taagan degmada Beled xaawo ee gobolka Gedo. Qaar ka mid ah xildhibaanada Aqalka Sare ayaa waxa ay sheegeen in dowladda...
Aqalka sare oo dalbaday ciidamo AMISOM
Mjournal :-Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare baarlamaanka Soomaaliya sheegay in ay dalbadeen ciidamo ka tirsan AMISOM, kuwaa soo oo loogu tala galay in ay suggaan Amniga xarunta Aqalka Sare. Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa sheegay in Go’aanka xarunta Aqalka Sare lagu geynaayo AMISOM ay...
Dhacdooyin la yaab leh oo ku soo kordhay magaalada Muqdisho
Mjournal :-Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo kordhay noocyo cusub oo dhacdooyin ah, kuwaasi oo qal qalgeliyay Magaalada, dadkana aad u hadal hayaan. Khamiistii ayaa Degmada C/casiis ee Gobolka Banaadir waxaa lagu sumeeyay haween ka shaqeynaayay dhanka Nadaafadda, kadib markii...
Dowladda Soomaaliya oo baaq u dirtay Jaamacada Carabta
Mjournal :-Xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu hambalyeysay Xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta sanad-guurada 73aad ee aas aaska Ururkaas oo ku beegneyd 22-kii bishan. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa la aas aasay sanadkii 1945, waxaana Soomaaliya ay xubin firfircoon ka tahay...
Madaxweyne Farmaajo oo madaxtooyada kula shiray Xildhibaanno iyo Wasiirro
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlada Fedraalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa kulamo kala duwan wuxuu la qaatay xildhibaano, Wasiiro iyo mas`uuliyiin kale oo Dowlada ka tirsan kulamadaasi oo Madaxweynuhu uu diirada uu ku saaraayay amniga iyo khilaafka siyaasadeed ee ka...
Aqalka sare oo maanta guddi u saaraya weerarkii Cabdiqeybdiid
Mjournal :-Xubnaha Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa maanta kulan ay isugu imaanayaan waxay Gudi baara weerarkii lagu qaaday Guriga uu Muqdisho ka dagan yahay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid u saari doonaan, Gudigaas oo baaridoona sababta ka dambeysa weerarkaasi....